नेकपाका नेताहरु सम्हालिनुस् | Ekhabar Nepal
गएका केही दिन देखि के भईरहेको छ, खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र किन स्वयं यसको व्यवहारको कारणले राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न जन्मिने अवस्था उत्पन्न भईरहेको छ । के नेकपाका नेताज्यूहरुले आफ्नो अभिभारा विर्सन थाल्नु भएको हो ? देश र जनताको स्वार्थ र हीतलाई सर्वोपरी नठानेर आफ्ना हीत र स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने गलत संस्कृति नेताज्यूहरुका मन मस्तिष्कमा उत्पादन ह’न थालेको हो ? नेताज्यू’हरु यस्तो नहोस् । जनताको ठूलो साथ छ र भरोसा छ नेपाल कम्य’निष्ट पार्टीमाथि । त्यसैले तपाईहरु सम्हालिनुस् । र जनताको अभिमत, आकांक्षा र आफ्नै वाचाहरुलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुस् भन्ने मेरा आफ्नै नेताज्यूहरुलाई आग्रह र अन’रोध छ ।
मैले यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्दछ’ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले देशमा एकाध घटनामा यस्तो नभईदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कमी रहेका हुन सक्दछन्, तर आमरुपमा राम्रा कामहरु सम्पादन गरेको छ । बरु यस्को सही सम्प्रेषण जनताको माझ हुन सकिराखेको छैन । त्यतातिर हामी सबैले ध्यान दिऊँ । यस्ले व्यवस्थालाई बलियो बनाउने छ । हाम्रा उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्न मद्धत प’र्याउने छ ।
जनताको अभिभावकको रुपमा सरकार
जनताको पेट कतै भोकै रह्योकि,
जनताको जीउ कतै नाड.्गै रह्योकि
जनता कतै चीसोले कठ्याड.ग्रीएकि
जनता कतै घर विहिन भएकि,
कतै वृद्ध बा आमाहरु असहाय, अपमानित भएकि
कतै गर्भवती महिला सुत्केरी व्यथाले अलपत्र परेकि
कतै हाम्रा छोरी चेलिवेटीहरु वेचविखनमा परेकि
युवाहरु कुलतमा फसेकि,
वेरोजगारीको चपेटामा निराशामा परेकि
भनेर यि सबै कुराको देखभाल गर्ने, समाधानमा लाग्ने सरकार आज देशमा छ । आज गरीब निमुखा जनताको असल अभिभावक बनेर उभिएको छ सरकार । यो हामी सबैका लागि गौरवको कुरा हो ।
राजनीतिक उपलव्धीहरुको संस्थागत विकास, संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन, शान्तिको प्रत्याभूति र समृद्धितर्फको यात्रामा देशलाई हिंडाउने अभिभारा यो सरकारका सामु उपस्थित थियो । संविधानलाई अस्वीकार गर्दै हिंडेका राजनीतिक दलहरु र तराई मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने उद्धेश्य राखेर हिंडेको पृथकतावादी समुहलाई संविधान मातहत हिंडाउने सरकारको सफलतालाई निश्चित रुपमा कम आँक्न मिल्दैन होला ।
संघीयता हाम्रो लागि नितान्त नयाँ अभ्यास थियो । हाम्रो देशको भूराजनीतिक परिस्थितिमा यसको प्रयोगको मौलिक मान्यता सहमतिमै हामीले तय गरेका थियौ । सहयोग, सहकार्य र समझदारीपूर्ण आपसी संबन्धबाट हाम्रो संघीयतालाई हिंडाउने दायित्व सरकारसँग थियो । आवश्यक कानुन निर्माण, संरचना निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रवन्ध जस्ता कुराहरुलाई समयसीमा भित्र सम्पादन गरेर सरकारले संघीयतालाई जनताको जीवनसँग गाँस्ने काम गरेको छ । यो चुनौतिपूर्ण काम थियो । तर आज देश संघीयतामा अभ्यस्त हुन थालेको छ । यो सरकारको सफलता होईन र ?
शान्तिपूर्ण वातावरण विकास र समृद्धि यात्राको पूर्व शर्त हो । ंवम, वन्दुक र आतंकको वीचमा विकास निर्माण संभव हुन सक्दैन । सरकारले यसवीचमा राजनीतिको नाममा धेरै हतियारवद्ध आतंकपूर्ण कृयाकलापमा संलग्न समुहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याएको छ र वार्तामा आउन नमान्ने समुहलाई राज्य शक्तिको माध्यमबाट निस्तेज पार्ने काम गरेको छ । गुण्डागर्दीमा संलग्न गुण्डाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ र गुण्डाराजबाट समाजलाई मुक्त गरेको छ । के यो सरकारको आवश्यक र असल काम भित्र पर्दैन र ?
राष्टियताको रक्षाकवचको रुपमा सरकार
सीमा समस्या देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूगोललाई एकलौटी रुपमा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेर भारतले नक्सा
प्रकाशन गरेपछि सीमा समस्या गम्भीर चुनौति बनेर देशका सामु खडा भयो । यद्यपि यो समस्या यतिबेलै उत्पन्न भएको समस्या भने होईन । यो सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको सीमाको टुँगो त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म नलगाएका कारण यो समस्या रहँदै आएको हो । सन् १९६२ देखि भारतीय सेनाले कालापानीमा परेड खेल्दा सत्तामा वस्नेहरु कसैले नदेखे जस्तो गरे, कसैले नसुने जस्तो गरे, कसैले थाहै नपाए जस्तो गरे । मुख्यरुपमा राष्टभन्दा कुर्र्सी प्यारो ठाने ।
तर वर्तमान सरकारले तथ्य, तर्क र प्रमाणहरु प्रस्तुत गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो, नेपाली भूमि कालापानीमा बसिरहेको भारतीय फौजले उक्त भूमि छोड्नुपर्छ भनेर स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरेको छ । भारत सरकार समक्ष कुटनीतिक नोट पठाएको छ । कुटनीतिक राजनीतिक पहलकदमी बढाएको छ । राष्टलाई एकताबद्ध गरेको छ । सरकारको यस किसिमको पहलकदमी प्रशंसनीय छ, स्तुत्य छ । .
सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षामा सरकार
वहुचर्चित वालुवाटार ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा वदनियतपूर्ण मनसाय र अनेकौं प्रपन्च रचेर व्यक्तिको नाममा गराईएको सूचना पाएपछि वर्तमान सरकारले आयोग गठन गरी छानवीन गर्यो । उक्त जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गराएरै छाड्यो । यस सिलसिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरेको छ र सार्वजनिक जग्गालाई नीजि बनाउने र निजी बनाउन प्रकृया मिलाउने दोषीहरुलाई कार्वाही गर्न अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
दोषी को हुन् ? उनीहरुले के दोष गरे भन्ने कुरा सरकारले भनेको होईन । यो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भनेको कुरा हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकार मातहतको अंग होईन, यो राज्यको स्वतन्त्र र संवैधानिक अंग हो ।
उसले गरेको कामलाई सरकारसँग जोडेर भ्रम फैलाएको र कुप्रचार गरेको देख्दा उदेक लाग्छ . र कतिसम्म आग्रही हुन सकेको होला अचम्म लाग्छ ।
जमीन किन्नेहरु कसरी उन्मुक्त भए, चोरले चोरेको सामान फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति पाउने भनेर पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ, । प्रश्न ठीकै हो, सामान फिर्ता गरेपछि चोरले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । तर यो त्यस्तै हो र ? यो त व्यक्तिको नाममा रहेको र व्यक्तिको नामबाट किनवेच हुँदै आएको जग्गा मालपोतमा नियमानुसार दस्तुर तिरेर खरीद गरेको हो । जग्गा फिर्ता गर्नुपरेपछि ऊ त पीडित पो बन्न पुग्दछ । सहजरुपमा आफ्नो दायित्व संझेर जग्गा फिर्ता गरेको कुरालाई समेत नकारात्म कढँगले प्रचार गर्न पूर्वाग्रह बाहेक केही हुन सक्दैन । अझै सरकारसँग जोडेर सरकारले जोगायो भन्न समेत भ्याईएको छ । यहाँभन्दा हास्यास्पद केही हुन सक्दैन । शंकाको भरमा भ्रमको महाजाल हानिएको छ । तथ्यमा जाऔं । नकारात्मक कुराको विरोध र आलोचना गरौं तर आग्रही नबनौं ।
यसरी नै सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कार्वाही अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमीनहरु फिर्ता लिने अभियान नै चलेको छ । वर्दियाको ४६ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा, र सिराहाको २१ विघा र माथिल्लो त्रिश’ली ए जलविद्धुत परियोजनाको ११० रोपनी जग्गा फिर्ता गराई सकेको छ । यो अभियानकै रुपमा जारी छ ।
तथ्यहरु यस्ता छन् । यि जग्गाहरु हडपिदा सरकारमा को को थिए ? कसकसको पालामा यि कामहरु भएका थिए । तथ्यमा जाऔं । यो सरकारले हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता मात्रै गराएको छ । आफ्नो कार्यकालमा एक टुक्रा जमीन कसैलाई हडप्न दिएको छैन । सत्य यही नै हो ।
भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको अभियन्ताको रुपमा सरकार ः
भ्रष्टाचार, कमिशन, घुस नेपाली समाजमा रहेको नकारात्मक प्रवृतिको उपज हो । विगतका सरकारहरु यस प्रवृतिका विरुद्ध कडाईकासाथ उभिन सकेनन् । जसका कारण यो प्रवृति झाँगिदै गयो । यो प्रवृतिका वाहकहरु ज’नसुकै दल वा झण्डामुनि ओत लागेका हुन सक्दछन् । मुख्य सवाल त्यो दल वा सरकारले त्यस्तो प्रवृतिसँग कस्तो व्यवहार अवलम्वन गर्दछ भन्ने हो ।
यतिबेला आर्थिक अनियमितता गर्नेहरु, भ्रष्टाचारीहरु, घुसखोरहरु र कमिशनखोरहरु डराउन थालेका छन् । विगतमा जसले यिनै धन्दा गरेर देशलाई डुबाएको छ , ऊ नै ठूलो मानिने, सम्मानित हुने समाजको नियति थियो । अहिले त्यो प्रवृतिमा परिवर्तन आएको छ । ठाउँका ठाउँ उनीहरु दण्डित भएका छन् । पद, पैसा, प्रतिष्ठा र संबन्धले कोही सररक्षित भएका छैनन् । सरकारले व्यवहारबाटै यो कुरा स्पष्ट गरि नै सकेको छ । सरकारको भ्रष्टाचारप्रतिको कडा कदम सर्वत्र प्रशंसनीय छ । प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको कमाण्डर हुनुहुन्छ । नेपालको ईतिहासमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने यस किसिमको संकल्प अगाडि बढाईएको छ ।
तरपनि प्रधानमन्त्रीलाई वदनाम गर्ने कोशिस भईराखेको छ । भ्रष्टाचारमा, नैतिक आचरणमा नाम जोडिने वित्तिकै ठूला ओहोदावालहरु दुधको माखो मिल्काईए झै मिल्काईएका छन् । संबन्धको दूरी हेरिएको छैन ।
आफ्नो मान्छे पर्यो भनेर सदन र सडकमा रोईकराई गर्नेहरु नै यतिबेला प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि भ्रम छर्ने अवान्छित कोशिस गरिरहेकाछन् । अरुलाई चोर औंला देखाउँदा बाँकी औलाहरुले आफैलाई देखाईरहेका हुन्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्दा राम्रो होला ।
विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकार
खाल्टाखुल्टी नभएको, धुलो नउडेको सलल्ल बगेको सडकमा मास्क नलगाई कहिले हिड्न पाईएला, कहिले गुड्न पाईएला भनेर जनताले सपना देखेको अवस्था थियो काठमाडौंमा । अहिले जनताको त्यो सपना विपनामा परिणत हुँदै गरेको अवस्था हो ।
काठमाडौंका धेरैभन्दा धेरै सडकहरु चिल्ला र व्यवस्थित हुँदै गएका छन् । करीब काठमाँडौंका सडकहरु खाल्टाखुल्टी मुक्त भएका छन् । धूलो मुक्त हुँदै गएका छन् । यो परिवर्तन होईन र ? तर कसै कसैले यो देख्न चाहन्नन्, देखेपनि भन्न चाहन्नन् ।
कहि एकाध खाल्टो देखियो भने लौ खाल्टो देखियो, सरकार असफल भयो भनेर ठूलो स्वर गरिहाल्ने र सामाजिक संजाल रंगाई हाल्ने प्रवृति छ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह बाहेक केही होईन । सम्पूर्णलाई अंश देख्ने र अंशलाई सम्पूर्ण भनेर प्रचार गर्ने प्रवृतिलाई रचनात्मक विरोध भन्न सकिएला र ? यो त सरकार विरोधी दृष्टिदोष भएन र ? जे होस् हाम्रो राजधानी सुन्दर बन्दैछ । यो नै खुशीको कुरा हो ।
आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सरकार केन्द्रीत भएर अगाडि बढिरहेको कुरा यस अवधिका आर्थिक र मानवीय विकासका स’चकांकहरुले देखाईरहेका छन् । यतिबेला उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र प्राप्तिपछिको एकदशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ३ वर्ष यता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर छ । विगत ३ वर्षदेखि कुनैपनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा कम छैन । यस अवधिमा गतवर्षको आर्थिक वृद्धि ७ं.१ प्रतिशत रह्यो ।
निर्यात २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ४ प्रतिशतले घटेको छ । कुल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापार विविधिकरणमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ । पहिले
भारतसित ६८ प्रतिशत र वाँकी अरु देशसँग ३२ प्रतिशतमात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ति देशहरुसित ४० प्रतिशतभन्दा वढी हुन थालेको छ । खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । दुधको उत्पादन उत्साहजनक छ । अण्डा र माछामासुमा देश आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ ।
पूर्वाधार विकासमा देशले चमत्कारिक प्रगति गर्दैछ । यस दुईवर्षमा ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनु, ३२५ वटा सडक पुल निर्माण हुनु, निर्माणाधीनलाई आधार मान्दा तुईनमुक्त नेपाल हुनुले देश तीव्र रुपमा निर्माणमा जुटिरहेको छ भन्ने संकेत गरिरहेका छन् ।
हुलाकी सडक, पूर्व पश्चिम राजमार्गको ६ लेनमा स्तरउन्नत, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कोशी कोरिडोर, किमाथाड.कादेखि विराटनगर रानीभंसारसम्मको सडक, कालीगण्डकी कोरिडोर कोरलादेखि भैरहवा सुनौलीसम्मको सडक, कर्णाली कोरिडोर हिल्सादेखि नेपालगंजसम्मको सडक, केरुड.देखि रसुवा सेफ्रुवेसी ह’ँदै धादिड.गल्छीसम्मको सडक, काठमाडौ निजगढ फास्ट ट्रयाक लगायत देशैभरि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट सडक निर्माणको अभियान नै चलिरहेको छ ।
नागढुँगा नौविसे सुरुड.मार्ग निर्माणको आरम्भसँगै नेपाल सुरुड.मार्गको नवीन युगमा प्रवेश गरेको छ । थानकोट चित्लाड., खुर्कोट चियाबारी, र फेदीखोला नयाँप’लमा सुरुड.मार्गको अध्ययन शुरु भएको छ । रुपन्देहीको सिद्धबाबामा डिपिआरको तयारीसहित १० अर्व वजेट नै विनियोजन भईसकेको छ ।
केरुड. काठमाडौ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग, रक्सौल काठमाडौ र पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग नेपाल राष्टका स्वप्नयोजना ह’न् । यसै आर्थिक वर्षभित्र जयनगरदेखि विजलप’रासम्म नेपालको आफ्नै रेल संचालन हुनेगरी काम भईरहेको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयारी अवस्थामा छ । यस रेलमार्गको काकडभीत्ता इनरुवा खण्डको यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउनको निम्ति आवश्यक वजेट स’निश्चित भईसकेको छ ।
राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सक्नेगरी अगाडि बढिरहेका छन् । मेलम्ची होस् वा माथिल्लो तामाकोशीको काम यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्र्ने उद्येश्यले तिव्ररुपमा अगाडि बढेको छ ।
नवलपुरको धौवादीमा फलाम उत्खनन् गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको छ र त्यहाँ भएको फलाम करीब ३० वर्ष प्रतिदिन करीब ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने परीक्षणले देखाएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण शुरु भएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाट विद्युत सहित १ हजार मेगावाट विद्युत राष्टिय ग्रीडमा जोडिनेछ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमवुद्ध विमानस्थल यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने तयारी भईरहेको छ । पोखरामा निर्माणधीन विमानस्थलको निर्माण कार्य पनि तीब्ररुपमा अगाडि बढेको छ । निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको ईआइएको काम सकिएको छ ।
लुम्बिनी, जनकपुर, पशुपतिनाथ लगायत धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको गुरुयोजना वमोजिम निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिईएको छ . र यि क्षेत्रहरुको समग्र विकासको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार विकासको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ । महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको विकासमा सरकार दिलोज्यानले लागिपरेको छ ।
कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको काम पनि असाध्यै महत्वकासाथ सरकारले अगाडि बढाईरहेको छ । सुपरजोन, जोन र पकेट क्षेत्र छुट्याएर कृषिको आधुनिकीकरणको प्रकृयालाई अगाडि बढाईदैछ । भौतिक तथा शैक्षिक हिसाबले सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको स्तरीकरण र प्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षाको वाहुल्य रहने गरी शिक्षामा रुपान्तरण ल्याउने गरी सरकार अगाडि बढेको छ ।
यि तथ्यहरु ह्ुन् जस्ले देश विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुततर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी बनाउँछौ हाम्रो देश । सुशासन, विकास, जनताको समृद्धि र सुख वर्तमान सरकारको अभिष्ट हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार अहिलेसम्मका उपलब्धीहरुलाई थप उपलब्धीमा विकसित गर्दै अगाडि बढोस् , आग्रह गर्दछ’ ।